Apple voampanga ho nandika ny patanty Wi-Fi CalTech | Avy amin'ny mac aho
Ny rafitra patanty dia mpanentana amin'ny fitoriana, ary Apple dia tsy olon-tsy fantatra amin'ireo toe-javatra ireo. Ny fiampangana farany dia avy Kalifornia Institute of Technology o Caltech. Ny patanty Caltech voalaza amin'ity tranga manokana ity dia napetraka anelanelan'ny taona 2006 sy 2012, ary mifantoha Kaody IRA / LDPC. Ampiasain'izy ireo ny circuitry encoding sy decoding tsotra indrindra izay natao hanatsarana ny taha sy ny taham-pahalalana amin'ny ankapobeny. Ireo teknolojia ireo ihany dia ampiharina ao anatin'ny fenitra 802.11n Wi-Fi y Wifi 802.11ac, izay ampiasaina amin'ny vokatra Apple maro.
Ny fitoriana an'i Apple dia natao tao amin'ny Fitsarana federaly any California, ary milaza fa ny vokatra Apple, ao anatin'izany iPhone, iPad, Mac, ary na dia ny Apple Watch mampiasa encoder, izay midika fa Apple dia manitsakitsaka patanty efatra.
Apple dia manamboatra sy mivarotra vokatra Wi-Fi izay mampiditra encode encoder IRA / LDPC, ary decoder izay manimba ireo patanty ireo. Ny vokatra manitsakitsaka ireto patanty ireto dia: iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5C, iPhone 5s, iPhone 5, iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, iPad Mini4, iPad Mini 3, iPad Mini 2, MacBook Air, na ny Apple Watch aza.
Ao anatin'ny akanjo itoviana, CalTech koa dia mitanisa ny Broadcom izay lazainy koa dia manitsakitsaka ireo patanty mitovy. Mety hisy dikany izany, raha jerena fa Broadcom dia iray amin'ireo mpamatsy lehibe an'i Apple ho an'ny chips Wi-Fi. Ireo chips ireo dia apetraka amin'ny karazana finday malaza indrindra an'ny Apple, ao anatin'izany ny MacBook Pro Retina, MacBook Air, ary iMac sasany.
Apple dia iray amin'ireo mpanjifa lehibe indrindra an'ny Broadcom. Tamin'ny 2012, 2013, ary 2014, ny varotra tamin'i Apple dia naneho ny 14,6%, 13,3% ary ny 14,0% amin'ny fidiram-bola Broadcom Corp.
Tsy fantatray ny hiafaran'izany, ary inona no hangataka amin'i Apple amin'ny fanitsakitsahana ireo patanty ireo. Fa ny fantatsika dia nangataka izy a fitsarana ny mpitsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple voampanga ho nandika ny patanty Wi-Fi an'i CalTech